Naghachi ozi ehichapụ na Outlook - DataNumen
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Naghachi ozi ehichapụ na Outlook
Naghachi ozi ehichapụ na Outlook
Hichapụ ozi ịntanetị na ndudue?
Mee ka nchekwa nchekwa ihe gị ehichapụ n'oge na-adịghị anya?
Lost ozi ịntanetị na-enweghị ike ịgbake?
Njehie dị iche na faịlụ PST?
Lost okwuntughe maka faịlụ PST gị?
Nsogbu Outlook mail?
DataNumen Outlook Repair na-edozi ihe niile a na ihe ndị ọzọ.
Naghachi ozi ehichapụkarị na Outlook dị mfe. Mgbe a pịrị bọtịnụ ihichapụ, a na-etinye email ahụ n'ezie na nchekwa ihe ndị ehichapụ. Toga na folda ahụ na-enye ohere ka agụọ email ahụ n'ụzọ zuru ezu, ọ ga-enwe ike ibugharị na folda ọzọ.
Ọ bụrụ na agbanyeghị, nchekwa Ihe ndị ehichapụ na-atọgbọ chakoo, maọbụ ọ bụrụ na ehichapụ ihe ahụ na Ctrl-Delete (ihe Microsoft na-ezo aka dị ka nhichapụ siri ike), ewepụrụ email na Outlook kpamkpam. Iweghachite email Outlook wee bụrụ ihe siri ike karị.
Dị ka Microsoft si akwado, “… ma ọ bụrụ na ị na-adịghị akpali ihe na-ehichapụ ihe nchekwa n'ihu gị ihichapụ ha, ihe ndị a na-ike na-ehichapụ, na ị na-enweghị ike naputa ha si ehichapụ ihe nchekwa.”
Nanị ụzọ ị ga-esi wepu ozi email dị otu a bụ iji ya DataNumen Outlook Repair - na-arụ ọrụ dị mfe ma dịkwa mfe nke idozi nsogbu ahụ.
Na-arụ ọrụ na Outlook 97, 98, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 na 2019.
Ofụri Esịt Recovers Outlook mail ozi, nchekwa, posts, nhọpụta, arịrịọ nzute, kọntaktị, ndepụta nkesa, ọrụ, memos, akwụkwọ akụkọ, ndetu na ndị ọzọ.
Nwere ike wepu email niile na Outlook - ma ederede ederede, usoro RTF ma ọ bụ HTML.
Outlook mail Mgbakwụnye na-natara na zuru.
A na-eweghachite ihe ndị agbakwunyere n'ụzọ zuru ezu.
Nkwado maka faịlụ PST karịrị 2 GB na nha ma kewaa faịlụ PST ma achọrọ.
Nkwado maka ịmịpụta faịlụ PST na usoro Outlook 97-2002 na usoro Outlook 2003-2010.
Ogbe idozi akwadoro.
Onweghi ihe omuma nka oru a choro.